> Resource > Android > Sida loo soo dejinta vCard Multiple galay Muuqaalka
Adeerkay ayaa 100 files .vCard (mid kasta heshiis gaar ah) taas oo uu ka aragti dhoofiyo ... hadda uu computer cusub oo uu doonayo inuu keeno wax xiriir ah gelin saadaasha. Waxaan isku dayay iyaga soo degida laakiin waxaan ahay soo xulan karin wax ka badan hal mar ah, waxaan sidoo kale isku dayay iyaga jiidayeen galay aragti laakiin waxa ay mid kasta furay kaliya iyo mar kale waxaan lahaa inay si gaar ah badbaadin mid kasta. Haddii qof kaa caawin karaan waxa ay ahaan laheyd weyn!
Weli adag dhibtoonaya inuu ka soo dhoofsadaan vCards badan galay Outlook mid mid? Waa daalin iyo caajis. Halkan waa hab soo jiidasho leh si fudud aad u. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inuu u jeesto Wondershare TunesGo (Windows) caawimaad. Tani software anfacaya oo lagu kalsoonaan karo siinayaa fursad ay ku soo dhoofsadaan badan oo files vCard in Outlook 2003/2007/2010/2013 aan dadaal aad.
Download software si dajiyaan file VCF in Outlook in badan.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo Wondershare inay dajiyaan badan oo vCard files si Muuqaalka mar, waa in aad leedahay iPhone, iPad ama iPod. Haddii aad tahay qof user ah Android, ha ka welwelin. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android (Windows). Tababaraha Tani Android sidoo kale awood aad u dajiyaan VCF badan galay Muuqaalka 2013/2010/2007/2003. Iyo tutorial waa la mid ah sida mid ka mid ah TunesGo. Halkan, waxaan soo qaadan doonaa TunesGo Wondershare sida tusaale.
Import VCF badan si Muuqaalka in talaabooyin fudud
Burcad TunesGo ka dib markii ay ku rakibidda kombiyuutarka. Markaas, suuqa kala xiriir muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 1. Connect taabashada iPhone / iPad / iPod in kombiyuutarka
Bilowga aad, xirmaan, iPad ah iPhone ama iPod in kombiyuutarka via cable USB ah. Marka xiran, iPhone, iPad, iPod si dhakhso ah loo ogaado, markaas uu ku qoran yahay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Transfer VCF badan si iPhone / iPod / iPad
Tiirka bidix, u tag "Xiriirada" oo waxaad ka samaysaa click ah xaq u leeyahay inuu abuuro koox cusub si loo badbaadiyo files vCard ah. In suuqa kala xiriir ah, guji "Import / Dhoofinta". Marka menu hoos-hoos u muuqataa, doortaan "contacts Import ka computer"> "ka file vCard". Markaas, caleenta your computer si aad u ogaato faylasha vCard aad rabto in aad soo dhoofsadaan in Outlook ah. Guji "Open" si ay u dajiyaan.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPhone badan, iPad iyo iPod. Hubi dhammaan qalabka Apple taageeray .
Tallaabada 3. Import VCF badan galay aragti ka iPhone / iPad / iPod
Hadda, dhammaan faylasha VCF aad go'aansato in aad soo dhoofsadaan in Outlook ayaa aad iPhone, iPad ama iPod. Sax off xiriir kuwaas oo guji "Import / Dhoofinta". In liiska jiido-hoos, doortaan "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay". Markaas, dooro "in Outlook Express" ama "in Outlook 2003/2007/2010/2013".
Hadda, aad u suurtagashay in ay dajiyaan VCF in Outlook in badan waqti. Waa wax fudud oo ku habboon. Iyadoo TunesGo, gebi ahaanba naftaada aad lacag la'aan ah karo faqri qadar badan oo waqti badan loo dhoofiyo files VCF in Outlook mid kale ka dib.
Isku day TunesGo inay dajiyaan vCard badan in Outlook.